देखाइसकेपछि किन लुकाएको वर्षा जी ? « फिल्मी नेपाल
Published On : 22 March, 2022 11:44 am
अमेरिका भ्रमणमा रहेकी अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटिले २ दिन पहिले सामाजिक सञ्जालमा विकिनी अबतारमा तश्विर पोष्ट गर्दै ‘इन्जोइ मूड’ सार्वजनिक गरेकी थिइन् । मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालमा उनको बोल्ड अबतारले चर्चा पायो ।
पछिल्लो समय राज कटुवालसँग ब्रेकअपको हल्ला चलिरहँदा कतै वर्षा ब्रेकअपको पीडा भुलाउन अमेरिका पुगेकी त होइनन् ? यस्ता गसिप पनि बने । तर वर्षाले उक्त पोष्ट नै फेसबुकबाट हटाएकी छिन् । ६ लाख बढि फलोअर्स बएको उनको फेसबुक पेजबाट अहिले उक्त पोष्ट गायब छ ।
होलिडे मूडमा बोल्ड वर्षा !
वर्षाको उक्त पोष्टमा फ्यान फलोअर्सबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएका थिए, केहिले भद्दा टिप्पणी गरेका थिए भने केहिले उनको स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिक्रिया दिएका थिए । समुन्द्री तटमा खुलेकी वर्षाले ‘टू पिस’ तश्विरसहितको पोष्ट किन गरिन् किन हटाइन् उनि आफैँ जानुन् तर हटाउनु नै थियो भने के देखाउन पोष्ट गरेको वर्षा जी ?
(माथी उल्लेखित तश्विर वर्षाले शनिबार राती उनको फेसबुक पेजमा अपलोड गरिएको तश्विर हो, जुन उनले हटाइसकेकी छिन् )